Delta variant miely any Hawaii satria mpandeha 30,000 tonga isan'andro any amin'ny seranam-piaramanidina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Delta variant miely any Hawaii satria mpandeha 30,000 tonga isan'andro any amin'ny seranam-piaramanidina
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Dr. Janet Berreman, mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny distrikan'i Kauai
Mpitsidika 30,000 na mihoatra no tonga any Hawaii afaka andro vitsivitsy, raha ny Delta miova amin'ny virus COVID-19 kosa dia lasa ahiahy ho an'ny Departemantan'ny Fahasalamana any Hawaii.
Manomboka amin'ny 8 Jolay, ireo mpitsidika vita vaksiny dia afaka mandeha any Hawaii tsy misy fetra, na eo aza ny fanaparitahana haingana ny karazana Delta an'ny virus COVID-19 ao amin'ny virus Aloha Fanjakana.
Ny sampan-draharaha misahana ny laboratoara ho an'ny departemantan'ny fahasalamana ao Hawai'i (SLD) dia nahatsikaritra tranga 13 feno an'ny SARS-CoV-2 miova B.1.617.2, fantatra ihany koa amin'ny fihenan'ny Delta.
Ny variana Delta dia hita ao O'ahu, Maui, Kaua'i, ary Nosy Hawai'i.
Delta Variant Spreading in Hawaii dia lasa ahiahy
Hatramin'ny androany, tranga sivy amin'ny karazana Delta no hita tany O'ahu, roa any Maui, iray any Kaua'i, ary iray amin'ny nosy Hawai'i. Ity isa ity dia antenaina hitombo avo roa heny isaky ny 10-14 andro.